Famindrana fo - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran-tany
lahatsoratra > nataon'i Josepf Tkach > hamindrana fo
John Bell dia nanana fahafahana hanao zavatra izay antenaina fa tsy ho vitan'ny ankamaroantsika mihitsy: mihazona ny fony eo an-tanany. Roa taona lasa izay, dia nanao fandidiana fo izy, izay nahomby. Noho ny fandaharana Heart to Heart ao amin'ny Baylor University Medical Center any Dallas, dia afaka nitazona teny an-tanany ny fo izay nitazona azy ho velona nandritra ny 70 taona talohan'ny tsy maintsy nosoloana azy. Ity tantara mahagaga ity dia mampahatsiahy ahy ny fifindran'ny foko. Tsy famindran-po "ara-batana" izany - izay rehetra manaraka an'i Kristy dia efa niaina ny dikan-teny ara-panahy tamin'io dingana io. Ny zava-misy feno habibiana amin’ny toetrantsika mpanota dia ny mahatonga ny fahafatesana ara-panahy. Nilaza mazava toy izao i Jeremia mpaminany: “Ny fo dia sahisahy sy kivy; iza no mahafantatra izany Üs: marary efa ho faty izy io]? » (Jer. 17,9).
Rehefa miatrika ny zava-misy iainan’ny “fon-tsaintsika” ara-panahy isika dia sarotra ny mieritreritra hoe mbola afaka manana fanantenana isika. Aotra ny vintana ho velona. Fa ny zava-mahagaga dia mitranga amintsika: Jesosy dia manolotra antsika ny hany tokana azo atao hahazoana fiainana ara-panahy: ny famindrana fo lalina ao anatintsika. Ny apostoly Paoly dia mamaritra io fanomezana feno fahalalahan-tanana io ho toy ny fanavaozana ny maha-olombelona antsika, ny fanavaozana ny maha-olombelona antsika, ny fiovan’ny saintsika ary ny fanafahana ny sitrapontsika. Izany rehetra izany dia ampahany amin’ny asam-pamonjena, izay iasan’Andriamanitra Ray amin’ny alalan’ny Zanany sy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Ny famonjena mahafaoka ny zava-drehetra dia manome antsika fahafahana mahafinaritra hanakalo ny fontsika efa maty ho an'ny fo vaovao sy salama - fo feno fitiavana sy fiainana tsy mety maty. Hoy i Paoly: “Fantatsika fa ny toetrantsika taloha dia niara-nofantsihana taminy tamin’ny hazo fijaliana mba ho simba ny tenan’ny ota, mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay maty dia afaka amin'ny ota. Fa raha niara-maty tamin’i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa” (Romana 6,6- iray).
Nanamboatra fifanakalozana mahafinaritra I Kristy tamin'ny alàlan'i Kristy mba hananantsika fiainana vaovao ao Aminy izay mizara ny fiarahany amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina. Rehefa miditra ny Taom-baovao isika dia andeha fa tadidintsika fa ny fahasoavana sy ny hatsaram-pahamasinan'ilay niantso antsika ihany, dia i Jesoa Kristy Tompontsika sy Mpanavotra antsika!